Ukuphupha ngeXhalanga Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Ukhozi ligama eliqhelekileyo lentaka enkulu edla inyama, efana nengcuka, etya kakhulu inyama efileyo, okt inyama efileyo. Kukho iindidi ngeendidi zamaxhalanga, ezifana nexhalanga lase-Egypt kunye ne-griffon vulture.
Ixhalanga lase-Egypt lelona lizwe liphuma kumazantsi eYurophu, eAsia naseAfrika. Kunqabile ukuba kufumaneke kwizikhundla zoMbindi weYurophu. Ixhalanga leGriffon, elilelosapho lwamaXhalanga aDala, lingummeli omkhulu wohlobo lwalo kwaye akunakuphazanyiswa ubukhulu balo obubodwa. Ubude bomzimba wentaka bufikelela kwiisentimitha eziyi-110 kwaye amaphiko ayo angafikelela kumasentimitha angama-269. Xa kuthelekiswa nexhalanga lase-Egypt, uluhlu lwayo luya kufikelela kumazantsi eYurophu eseMbindini. Ngamanye amaxesha lide libhabhe liye emantla eYurophu esembindini.
Sikwathanda ukusebenzisa igama "ixhalanga" ngokufuziselayo kubantu esibaziyo njengabaxheli begazi, abaxhaphazi, abaxhamli, ookrebe, kunye nababulali. Ixhalanga elithi, ngokuthetha, likhuphe imali ezipokothweni zethu.
Kodwa kutheni uphupha ixhalanga? Ithini intsingiselo yephupha malunga nolu phawu lwephupha kwaye litolikwa njani ngokuchanekileyo?
1 Uphawu lwephupha «ixhalanga» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ixhalanga» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ixhalanga» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ixhalanga» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba ixhalanga lidibana nathi ephupheni, kusenokwenzeka ukuba liphupha elidala iimvakalelo ezingathandekiyo kuthi, kuba ubukhulu becala sizidibanisa ukufa kwaye ukubola. Nangona kunjalo, akufuneki koyikwe ukuba oku kwangoko kubonisa ukufa okusondeleyo.
Umfanekiso "wephupha" uphupha ubonakala ngathi isilumkiso qonda umphuphi ukuba kufuneka alumkele abantu abagqitha izidumbu ngenxa yokunyoluka kwabo, oko kukuthi. Ngubani osafuna ngaphezulu kwaye uyavuma ukwenzakalisa abanye abantu. Oku kufanele ukutolikwa ngakumbi ngoluhlobo xa ubani esoyika ixhalanga ephupheni. Ngokufanelekileyo kukho umntu ebomini babaphuphi abalinde nje ixesha elifanelekileyo lokufumana ubutyebi.
Nangona kunjalo, ukuba umntu angaloyikisa ixhalanga ephupheni okanye alibukele libhabha ngaphandle kwexhoba, aliyi kuthatha monakalo mkhulu. Nangona kunjalo, kokukhona ixhoba lexhalanga likhulu, kokukhona liya kuba likhulu. ilahleko nokuba umntu uyasokola.
Uphawu lwephupha «ixhalanga» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwindawo yokujonga ukutolikwa kwengqondo kwamaphupha, kuhlala kukho unxibelelwano nesimboli yephupha "ixhalanga." amava akho omphefumlo. Ixhalanga ngokwalo lidla ngokuba sisilwanyana esingenaluvelwano kuthi, esidibanisa neempawu ezingathandekiyo. Ukubawa, ukufa, ingozi, ukukhankanya nje ezimbalwa.
Ukuba ufumana ixhalanga ephupheni, eyona nto ibaluleke kakhulu ekutolikeni ngokuchanekileyo iphupha yindlela imeko yephupha eyaboniswa ngayo kunye nendlela iphupha elalifumana ngayo imeko ngokweemvakalelo. Ngokunokwenzeka umphuphi ngokwakhe ngumntu ongacingeliyo othanda ukuxhaphaza abanye kwaye alwele izibonelelo zakhe kuphela. Inqe apha lifanekisela lakhe, Isimo sokuxhaphaza kwabanye.
Nangona kunjalo, ixhalanga linokuzekelisa ukuzibandakanya kwalo neziqu zalo. Iphupha liboniswa kwi el mundo ukuvuka amaxesha amaninzi. kukuzingca Oololiwe, uneemfuno eziphezulu kwaye ngenxa yoko kunokwenzeka ukuba utyibilike ngakumbi uye phambili uye wedwa ekuhlaleni.
Amaxesha amaninzi awunakukuqonda oku kwaye uphawu lwephupha "ixhalanga" lingathanda ukukumema ngokubonakala kwalo ephupheni ukuze ugxile ngakumbi ebantwini kwindawo ohlala kuyo, kunokuba ujike nje. Kungenxa yokuba ukuba awuguquki kwindlela oziphethe ngayo, kungekudala abahlobo bakho baya kurhoxa ebomini bakho kwaye kukho isoyikiso sokwahlulwa ngokwasentlalweni nangokweemvakalelo.
Uphawu lwephupha «ixhalanga» - ukutolika kokomoya
Ixhalanga limi kutoliko lokomoya Ukuhlanjululwa, ukufa y I-Renacimiento. Kuba zezentaka ngokubanzi, ukutolikwa kwamaphupha alo phawu lwephupha kunganika ulwazi oluthe kratya malunga nokutolikwa apha.